Gisele Marie oo ka yaabsatay dadkowga Islamka ah . | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Layaabka » Gisele Marie oo ka yaabsatay dadkowga Islamka ah .
Gisele Marie oo ka yaabsatay dadkowga Islamka ah .
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 31-08-16 8:14 AM Haweeneyda rer Brazil Gisele Marie ayaa ku waalatay qaraacida Kataarka Haweeneydaan ayaa aha Haweeney 42 jir ah kana soo jeedo Rer heysta diinta Karishtanka balse gabadhaani ayaa heysato Diinta Islaamka Gisela ayaa ah gabar aad u jecel garaacida Kataarada .
Gisele Marie ayaa ku soo bar baartay Magaalada Sao Paulo ee Dalka Brazil Gisele ma ahan qof ku dhalatay diinta Islamka waxa ee ku sooo biirtay sanadka 2009 haweeneydaan ayaa wax ee ka qalin jibisay German Catholics .
Arinta ee dadka ugu yaabsatay Gabadhaani ayaa ah iyada oo xiran dharka astaanta u ah dumarka islamka in ee xirtaan Indhashareerka iyo Hijaabka ayaaa waxa ee ku dhax jirtaan Muusikada Haweeneydaan oo mar la weydinayay waxa ee tiri in Musikada tahay wax ee ka hesho aysan dadka warkooda waxba u arkin .
Gisele ayaa haatan ku mashquulsan soo saarida cajal kaasi oo soo bixi doono dhamaadka sanadkaani.